Sidee loo beddelaa Sawirka YouTube-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo beddelaa sawirka YouTube?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 483
YouTube waa shabakad bulsheed ee videos taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda inay abuuraan liisas, sidoo kale waxay fududeeyaan la socodka fanaaniinta caanka ah iyo u dirista faallooyinka fiidiyowyada lagu soo rogay shabakadda. Si kastaba ha noqotee, si loogu raaxeysto barxaddan waa lagama maarmaan in la abuuro xisaab.
Dhinaca kale, tillaabooyinka la raacayo si loo beddelo sawirka sawirka ee Waxaad Tube way fududahay. Shabakadan bulshada waxay si toos ah ugu xiran tahay Google. Waxaad Tube kaa codsan doontaa inaad gasho boostadaada Google, taasi waa, Gmail, si aad u gasho koontada aad horay uga furtay You Tube.
Tallaabooyin fudud oo waxtar leh oo lagu beddelayo sawirka
Tallaabada ugu horreysa ee lagu beddelo sawirka waa inaad gasho Gmail, taas oo ay lagama maarmaan u tahay in la furo bogga www.youtube.com. Qaybta kore ee dhinaca midig ee shaashadda astaanta "bilawga kulanka" ayaa soo muuqan doonta, waa inaad gujisaa "click”Halkaas iyo koontada aad ka furtay Gmail.
Si aad ugu sii wadato hawshan, waa inaad gashaa xogtaada isla markaana waxaad isla markiiba marin doontaa koontadaada 'Tube Tube'. Marka aad gudaha ku jirto kalfadhiga, waxaad arki doontaa in sawirkaaga muuqaalka 'You Tube' uu ka muuqdo midigta kore ee shaashadda.
Tallaabooyinka lagu beddelayo sawirka
Haddii aad rabto inaad beddesho kan sawir waa inaad siisaa "click"Dushiisa oo dooro ikhtiyaarka" You Tube Settings ", oo leh astaan ​​giraangiraha qalabka. Shabakadani waxay kuxirantahay Google sawirkan ka muuqdaana waa midka aad ku shubtay astaantaada Google+. Gaar ahaantan micnaheedu waa haddii aad bedesho sawirka You Tube, waxaad sidoo kale beddeli doontaa sawirka Google+.
Kadib qaybta dhexe ee shaashadda ayaa ka soo muuqan doonta goobo kala duwan oo wax laga beddeli karo. Si aad u badasho sawirka sawirka waa inaad siisaa “click”Magacaaga isticmaale. Ku madal Adiga tifaftiraha fiidiyowga ee 'Tube' ayaa kuu oggolaanaya inaad si toos ah uga tafatirto boggaaga Google+
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan rabin inaad ka baxdo bogga, waxaad calaamadeyn kartaa magaca user. Hadda kanaalka You Tube ayaa soo bixi doona, si markaa aad u beddesho sawirka waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dul dhigto tilmaamaha midka aad hadda haysato waxaadna arki doontaa sida badhan qalin leh uu u muuqdo inuu wax ka beddelo.
Ka dib markaad dhamayso talaabadan, kanaalka You Tube ayaa soo bixi doona oo beddeli doona sawirka, kaliya waa inaad dul dhigtaa tilmaamaha midka aad hadda haysato waxaadna awoodi doontaa inaad aragto sida badhanka ugu muuqdo qalin, kaas oo faa'iido u leh in la qaado shaqada ka baxay daabacaad. Kadibna waa la siiyaa "clickCalaamaddan.
Xulashada sawir qaadista
Tallaabada ugu dambeysa ee lagu beddelayo sawirka adiga Tube waa inaad doorato midka cusub imagen waxaad dooneysaa inaad kuhesho shabakadan bulshada iyo Google+. Waxaad dooran kartaa sawir aad kaydisay kombuyuutarkaaga ama waxaad dhigtaa “xiriiri ” qaar ka mid ah oo aad ka heli karto shabakadda.
1 Tallaabooyin fudud oo waxtar leh oo lagu beddelayo sawirka
2 Tallaabooyinka lagu beddelayo sawirka
3 Xulashada sawir qaadista
Sidee looga diiwaangeliyaa adiga Tube?
Sidee loo Isticmaalaa You Tube si aad u siiso fasalo dalwad ah?